Arch Linux inopinda 2021 nemufananidzo wekutanga wegore neLinux 5.10 | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mekudzidza nezve kuburitswa uku uye kutarisa kuburikidza ne database yedu, ndakashamisika kuti hatina kuburitsa chero chinhu pane ino inoshanda system kubva Kukadzi 2020. Ini handizive chikonzero, pamwe ndezvekuti ivo pachavo vakazviburitsa zvishoma muma network uye isu takanganwa nezvazvo, asi Arch Linux 2021.01.01 Yakatangwa maawa mashoma apfuura, uye inouya neimwe yakasarudzika ruzivo.
Kugoverwa kunoburitsa vhezheni nyowani mwedzi mitanhatu, kana kunyangwe kureba sezvazvakaita kuna Debian, kazhinji kunosvika ne runyora rwemashoko yakawandisa kupfuura Rolling Inosunungurwa senge Arch Linux. Uye ndeyekuti iyo Rolling Kuburitswa iri kuwedzera shanduko nekukurumidza pavanenge vagadzirira, uye muchokwadi havavhure vhezheni nyowani, asi mifananidzo mitsva iyo inosanganisira nhamba nyowani uye dzimwe nguva zita idzva rekodhi, seManjaro. Hongu vanowanzo taura kana paine vhezheni nyowani yekernel, uye iyi itsva ISO anosvika neLinux 5.10.
Arch Linux Zvinoratidza 2021.01.01
Linux 5.10.3 LTS. Vhura ichi chinyorwa Iwe une runyorwa rweanopisa matsva maficha, senge EXT4 ikozvino inotsigira zvinokurumidza kuita uye nekukurumidza faira rinonyora kuita muDIO / DAX modes.
Tsigiro yeiyo ARMv8.5 memory tagging yekuwedzera.
Tsigiro yeAmazon Nitro enclaves.
Tsigiro yakawedzerwa iyo SM2 dijitari siginecha algorithm.
Ndangariro dzinoyeuchidza mamwe maitiro.
AMD SEV-ES rutsigiro rwekunyorera kweyekushomeka kwevaenzi chinzvimbo pane vakasarudzika vashanyi.
Kugadziridza kwekuita kwe virtio-fs.
RISC-V rutsigiro rwekuvakisa kubhowa pane EFI masisitimu.
Mese mapakeji akagadziridzwa, kusanganisira mitsva shanduro yemabhurawuza uye mamwe ma software, pamwe nekuchengetedza zvigamba zvakaburitswa muna Zvita 2020.
ari Vashandisi varipo vanogona kugadzirisa pamwe nemurairo sudo pacman -Syu, kunyangwe ivo vangangove vatove nezvakawanda zvakagadziriswa zvakaiswa. Zvekuisa zero, inova chikonzero chiri kumashure kwemifananidzo mitsva, Arch Linux 2021.01.01 inowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux inopinda 2021 ine yekutanga mufananidzo yegore neLinux 5.10
"Ndakashamisika kuti hatina kuburitsa chero chinhu pamusoro peiyi sisitimu yekushandisa kubva Kukadzi 202" inofanirwa kunge iri nekuti kubva nhasi tiri muna Ndira 3, 2021.
Manjaro ine iyo 5.10.2-2